Zoom Ngwa Nbudata maka ekwentị Jio [Nbudata Ozugbo] | RoidHub
»Mbugharị App Download maka Jio ekwentị [Ngwa ngwa Download]
Wepụta Ngwa Download maka Jio Ekwentị [Ngwa Download Na]
Kwarantaini ma ọ bụ. Ma oria ojoo ma obu oria. Oku vidiyo aburula ihe di nkpa. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Jio ekwentị, ebe a anyị ga-akọwa usoro maka nbudata Zoom App maka Jio ekwentị.
N’oge ọrịa na-efe efe, anyị na-agafe n’oge na-enweghị atụ. Ndụ agbanweela. Nnwere onwe nke njem na ngagharị nke anyị were ugbu a abụrụla ihe okomoko.
N'ọnọdụ ndị dị otú a, ọ gaghị ekwe omume ịhapụ ọrụ, ịnọ naanị ya n'ime ụlọ na-atụ egwu nje na-agbasa.
Nke a bụ ya mere ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-abịa na nhọrọ ọzọ iji mee ka arụmọrụ ha na-aga nke ọma ka ọ ga-ekwe omume. N’ọnọdụ a, iji nzukọ na ngwa vidiyo abụrụla usoro a na-ahụkarị, ịrụ ọrụ na mkparịta ụka.
Ọ bụrụ na ị na-eji ekwentị Jio na India. Might nwere ike ịchọta nfe iji jikọọ ndị ọrụ ibe gị ma ọ bụ ndị ọzọ ị hụrụ n'anya site na ngwa na-enyocha vidiyo dịka Zoom App. Anyị ga-enye gị usoro na isi mmalite iji nweta ya.
Zoom App Download maka Jio Ekwentị: Otu esi eme ya?
Atụmatụ nke mbugharị ngwa
Esi ibudata mbugharị ngwa maka ekwentị Jio
Etu ị ga-esi rụọ Zoom App APK Download maka ekwentị Jio
Zoom App bụ maka mobiles yana PC. I nwekwara ike ibudata ma wụnye ngwa a na ekwentị Jio gị. Iji ya, ị nwere ike isoro ndị sonyere nzukọ ruo ihe ruru otu narị mmadụ.
Gị na igwe mmadụ dị otu a ị ga - ahụ mmekọrịta dị oke mma, nke dị elu, ma na - agbarịta ihu na ihu, ma soro na ya. N'otu oge ị na-ekerịta ihuenyo gị ma na-ezirịta ozi site na ozi nnata-ngwa.
Enwere ike iji Zoom App na-emeri emeri na ekwentị Jio maka nzukọ ntanetị, nzukọ ọgbakọ vidiyo, na iji otu ozi zie ozi.
aha Nzuko igwe ojii
Aha ngwugwu iheegwu.zoom.videomeetings
Ngwa a kachasị mma n'etiti ngwa niile nke ụdị ya. Younwere ike ịnụ ụtọ atụmatụ ndị a ozugbo nbudata Zoom App maka ekwentị Jio.
Screendị mma ịkekọrịta kacha mma
Ekekọrịta ihuenyo ozugbo na ekwentị gị Jio.
Ihe onyonyo nke onyonyo, webụsaịtị, mbanye Google, faịlụ igbe, na igbe mbadamba, ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọzọ.
Zipu na nnukwu ederede, onyonyo, na faịlị ziri ezi site na ekwentị mkpanaaka Jio gị site na iji ya.
Gosi onodu o di.
Can nwere ike ịkpọ kọntaktị ekwentị gị ma ọ bụ kọntaktị email.
Can nwere ike sonye dị ka ndị na-ege ntị ma ọ bụ dị ka ọkà okwu na-arụsi ọrụ ike
Na-arụ ọrụ na njikọ ịntanetị niile gụnyere 3G / 4G ma ọ bụ njikọ WiFi.
Ga-agụ ihe ndị a iji Jiri edemede zuru ezu maka ndị ọrụ ekwentị JIO.
Free Fire Download na Jio ekwentị
Enwere ụzọ abụọ iji budata ngwa a. Otu sitere na ụlọ ahịa google na-egwuri egwu nke ọzọ dị ka faịlụ APK nke enwere ike itinye ya na ekwentị Jio ma emesịa. Nke a bụ otu esi ebudata ya na Google Playstore.
Gaa na Google Play Store (Njikọ na njedebe nke ederede)
Chọọ maka mbugharị ngwa site na nchọta ọchụchọ ahụ n'elu nke ibe ahụ.
Kpatụ ma ọ bụ pịa na ngwa awụnyere
Ozugbo usoro a zuru ezu, ị nwere ike ịchọta akara ngosi ngwa na ihuenyo ekwentị gị Jio. Naanị kpatụ ya imeghe ma nwee njikọ ozugbo.
Nke a dị mfe dịka usoro maka nrụnye. N'ebe a, ị ga - agafe usoro ndị ọzọ ma wụnye ngwa ahụ na aka gị. Anyị ga-akọwa usoro n’usoro. Have ga - eme usoro nke ọnụọgụ ndị ahụ gosipụtara.
Nzọụkwụ mbụ bụ ibudata faịlụ APK. Maka nke ahụ, ị ​​ga - pịa ma ọ bụ pịa bọtịnụ 'Download APK' n'okpuru.
Nke a ga - ebido usoro ahụ n'ime oge 10-nke abụọ (dabere na ọsọ ịntanetị gị).
Ozugbo ịmechara usoro a, chọta faịlụ APK na ndekọ mkpanaka gị wee pịa ya.
Lee enwere ike kpaliri gị ime ka nhọrọ Unknown Sources. Nwere ike ime nke ahụ site na ntọala nche.
Kpatụ pịa ugboro ole na ole, ị ga-anọ na njedebe nke usoro maka nrụnye.
Nke a mezue usoro nke nrụnye. Nwere ike iji Zoom maka oku vidiyo na nkwukọrịta.
Nbudata mbugharị ngwa maka ekwentị Jio chọrọ usoro ndị dị mfe ịgbaso. Mgbe ahụ ị nwere ike ịnụ ụtọ atụmatụ niile nke ngwa a dị oke egwu. Iji nweta Zoom APK iji pịa njikọ dị n'okpuru ma ọ bụ ịnwere ike ịga na Play Store ozugbo site na ịme ọpịpị njikọ nke abụọ.
Bugharịa ngwa APK
Zoom App Download maka ekwentị Jio
Ịrụ egwu (8)